Ciidamada Xoogga dalka oo deegaan muhiim ah kala wareegay Al-Shabaab | HalQaran.com
Ciidamada Xoogga dalka oo deegaan muhiim ah kala wareegay Al-Shabaab
Awdheegle (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya deegaanka Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa sheegaya, in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ay maanta kala wareegeen deegaanka Awdheegle.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab ay saakay isaga baxeen gabi ahaanba deegaanka Awdheegle, waxaana iyada oo aan wax dagaal ah dhicin si buuxda gacan ku heynta deegaanka ula wareegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isku dhinac ah.
General Odawaa Yuusuf Raage, taliyaha ciidamada lugta oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ay la wareegeen deegaanka Awdheegle ayna qorsheynayaan in ay isku sii fiidiyaan deegaannada kale ee ay ku harsan yihiin Al-Shabaab.
Waxaa iminka deggan xaaladda deegaanka Awdheegle ee gobolka Shabeellaha hoose, mana jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay isbeddelka ku yimid gacan ku heynta deegaankaasi.
Wixi warar ah ee ku soo kordha kala soco Halqaran.com, insha allaah.